आज पाकिस्तानमा चुनाव, ८४९ सिटका लागि करीव १२ हजारबीच प्रतिष्पर्धा ! - Everest Dainik - News from Nepal
आज पाकिस्तानमा चुनाव, ८४९ सिटका लागि करीव १२ हजारबीच प्रतिष्पर्धा !
काठमाडौं, साउन ९ । १० करोड ६० लाख मतदाता रहेको पाकिस्तानमा आज आम निर्वाचन हुँदैछ । चुनावमा ८४९ सिटको लागि ११ हजार ८५५ उम्मेदवारबीच प्रतिष्पर्धा भइरहेको छ । त्यहाँको निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सभाको २७२ सिटको लागि ३४५९ जना भिड्दैछन् भने ४ वटा प्रान्तीय सभाहरुको ५७७ सिटको लागि ८३९६ उम्मेदवारहरु खडा भएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस पाकिस्तानको निर्वाचन तालिका किन परिवर्तन भयो ?
पाकिस्तानी मुस्लिम लिग-नवाबका सभापति सहवाज सरिफ ४ स्थानबाट प्रतिष्पर्धामा छन् भने यसपटकको चुनावमा अपेक्षाकृत राम्रो नतिजा हात पर्ने अनुमान गरिएको दल तरिक-ए-इन्साफका प्रमुख तथा पूर्वक्रिकेटर इमरान खानले ५ स्थानमा मनोनयन गरेका छन् । पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जर्दारी भने ३ क्षेत्रबाट चुनाव लड्दैछन् ।
तर पाकिस्तानी राजनीतिमा अनिश्चिता भने जहिले कायम रहेको छ । पछिल्लो पटक गएको वर्ष पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई पदबाट हटाएपछि सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नसक्ने अनुमान गरिएको थियो र डर थियो कि फेरि सेना सत्तामा आउने छ । तर संसदले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ ।
पाकिस्तानमा सन् २०१३ मा चुनाव भएको थियो । पाँच वर्षअघि र अहिलेको अवस्था पूरै फरक रहेकाले सत्ता समिकरण फर हुने राजनीतिक विश्लेषकले बताएका छन् । नवाज शरीफमाथि लागेको भ्रष्टाचार आरोप, धार्मिक दलको प्रभाव तथा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रभावका कारण पाकिस्तानको परिवेश परिवर्तन भएको छ । यस्तै बलियो बनेर उदायका इमरान खान, टक्कर दिन तयार रहेका बिलावल भुट्टोसहितले चुनावलाई थप रोमाञ्चक बनाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस पाकिस्तान चुनावबारे भारत भन्छ-‘नयाँ सरकारले आतंकलाई खतम गर्दै सुरक्षित देश बनाअाेस्’
पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ र उनकी छोरी मरियम भ्रष्टाचार आरोपमा जेल गएपछि पाकिस्तानको राजनीतिमा ठूलो उथल–पुथल भएको छ । तर पनि उनको पार्नी मुस्लिम लिग ९नवाज० लाई अहिले पनि सत्ताको दौडमा कडा प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेरिएको छ । -एजेन्सी
ट्याग्स: ८४९ सिटको लागि करीव १२ हजारबीच प्रतिष्पर्धा, Pakistan election, पाकिस्तानमा चुनाव